Isixazululo Sesistimu Yokugcina Amandla, Abakhiqizi Besixazululo Sesistimu Yesitoreji Samandla sase-China, Abahlinzeki, Ifektri - HNAC Technology Co., Ltd
Ikhaya>Umhlinzeki Wemikhiqizo>Isixazululo Sesistimu Yokugcina Amandla
I-HNAC ingahlinzeka ngemikhiqizo yokugcina amandla efakwe umshini ohlanganisiwe wokugcina ukukhanya, isiguquli sokugcina amandla kanye nohlobo lwebhokisi lokulondoloza amandla:
1. Umshini ohlanganisiwe wesitoreji esibonakalayo: Umshini ohlanganisiwe wesitoreji se-optical iyidivayisi exhunywe kuhlelo lwe-photovoltaic, isistimu yebhethri kanye negridi (kanye/noma ukulayisha) ukuze kubonakale ukuguqulwa kwamandla kagesi. Ingakwazi ukulawula inqubo yokukhipha i-photovoltaic kanye nenqubo yokushaja nokukhipha ibhethri. Isebenzisa ukuguqulwa kwe-AC-DC, ingahlinzeka ngokuqondile ngomthwalo we-AC ngaphandle kwegridi yamandla.
2. Isiguquli sesitoreji samandla: Kusistimu yokugcina amandla e-electrochemistry, okuyidivayisi exhunywe phakathi kwesistimu yebhethri negridi (kanye/noma ukulayisha) ukuze kufezeke ukuguqulwa kwezindlela ezimbili zamandla kagesi. Ingakwazi ukulawula inqubo yokushaja nokukhipha ibhethri, futhi yenze ukuguqulwa kwe-AC-DC. Ingakwazi futhi ukunikeza amandla ngokuqondile ekulayisheni kwe-AC.
Kulezi zisetshenziswa ezimbili ezingenhla, imikhiqizo emincane yokugcina amandla ingasetshenziswa ezimeni ezifana nokuphakelwa kukagesi ekhaya, ukunikezwa kukagesi wasensimini, neziteshi eziyisisekelo zokuxhumana, futhi imikhiqizo yokugcina amandla emikhulu nemaphakathi ingasetshenziswa ezimeni ezifana namandla e-generation-side energy. isitoreji, isitoreji samandla esiseceleni kwegridi, kanye nesitoreji samandla se-microgrid.
3. Isitoreji samandla sohlobo lwebhokisi: Ngenhloso yokuphromotha umkhiqizo kanye nokusetshenziswa, imikhiqizo emine ye-PCS eneziqukathi yenziwe, imikhiqizo esezingeni edidiyelwe ye-PCS booster edidiyelwe, kanye neminye imikhiqizo ye-PCS yokugcina amandla yohlobo lwebhokisi kanye nezinhlelo zokugcina amandla zohlobo lwebhokisi. kungenziwa ngezifiso futhi kuthuthukiswe. Uhlelo lokugcina amandla lungenziwa ngokwezifiso futhi luklanywe ngokuvumelana nezidingo ezahlukene zabasebenzisi. Ingakwazi ukuhlangabezana nezidingo zezimo ezihlukene namandla ahlukene njengokushefa okuphezulu/ukushintshashintsha kwemvamisa, isistimu yegridi encane yamandla amaningi, kanye nokuphakelwa kwamandla okusekela isipele okusheshisa.
Izici zezigaba ezintathu ezinkulu zemikhiqizo yokugcina amandla zihlanganisa imishini ehlanganisiwe yokugcina ukukhanya, iziguquli zokugcina amandla kanye nohlobo lwebhokisi lokugcina amandla:
1. Umshini ohlanganisiwe wesitoreji:
A. Isixazululo esihlanganisiwe sisekela ukufinyelela ngesikhathi esisodwa kwemithwalo, amabhethri, amagridi kagesi, amajeneretha edizili, nama-photovoltaics;
B. Umsebenzi we-EMS ohlanganisiwe, ukunikezwa kwamandla kuphephile futhi kuzinzile, futhi izinga lokusebenzisa amandla amasha liyakhuliswa;
C. Ukushintsha okungenazihibe phakathi kwezifunda ze-on-grid kanye ne-off-grid, ukuhlinzekwa komthwalo okungaphazamiseki;
D. Qedela umsebenzi wokuvikela ukuze kuvikelwe umshini ohlanganisa konke kanye nebhethri;
E. Ukusekelwa okuguquguqukayo kwamabhethri e-lithium namabhethri e-lead-acid
F. Isilawuli se-photovoltaic singanwetshwa ukuze kube lula ukucushwa okuguquguqukayo komthamo we-photovoltaic
2. Isiguquli sesitoreji samandla:
A. Ngesinxephezelo samandla asebenzayo ahlakaniphile nemisebenzi yesinxephezelo esivumelanayo, ithuthukisa ngempumelelo ikhwalithi yegridi yamandla;
B. Ngokuvikelwa kwesiqhingi kanye nokugibela i-voltage ephansi ngokusebenzisa umsebenzi (kungasethwa);
C. Ukusebenza okuhlakaniphile okuya phambili nokuhlehlisa ukuze kuthuthukiswe ukwethembeka kwesistimu;
Idizayini ye-D. DSP ibona ukulawulwa kwedijithali ngokugcwele kwemojula yesiguquli sokugcina amandla;
E. Ukuvikelwa okuningi kokuphepha, i-AC ne-DC ukuvikelwa kwamandla kagesi nangaphansi, ukuvikelwa kwesekethe emfushane;
F. Yamukela ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bokulungisa isici samandla asebenzayo ukuze unciphise ukuphazamiseka kwama-harmonics kugridi yamandla;
G. Inomthamo wamagagasi ohhafu kanye nokuguquguquka okuhle komthwalo.
3. Uhlobo lwebhokisi lokugcina amandla:
A. Umklamo owenziwe ngendlela oyifisayo ukuhlangabezana nezidingo ezahlukene zamakhasimende;
B. Isakhiwo sesistimu ye-BMS enamazinga amathathu, iphephile futhi inokwethenjelwa;
C. Ukuhlanganiswa kwesistimu ephezulu, isistimu yebhethri ehlanganisiwe, i-PCS, isistimu yokulawula amandla, uhlelo lokulawula izinga lokushisa, uhlelo lokuvikela umlilo, uhlelo lokulawula ukufinyelela, njll;
D. Kuhlanganisa uhlobo olulodwa kanye non-zodwa uhlobo;
I-E. Millisecond switching ingasetshenziswa njengesipele samandla esisetshenziswa esibalulekile;
F. Inokuxhumana okuphelele, ukuqapha, ukuphatha, ukulawula, ukuxwayisa kusenesikhathi kanye nemisebenzi yokuvikela, ukusebenza kwesikhathi eside okuqhubekayo nokuphephile, ukutholwa kwesimo sokusebenza kwesistimu ngekhompuyutha engumsingathi, amakhono aphelele okuhlaziya idatha, nemisebenzi yokuphakelwa kwamandla okuphuthumayo.